Swordfish (2001)မြန်မာစာတန်းထိုး - စာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
ကဲ...တစ်ခါတော့ လူစုံတက်စုံပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုကို ကြည့်ကြမယ်ဗျာ။
Face off မင်းသား John Travolta
X-Men မင်းသား Hugh Jackman
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ Monster's Ball ဇာတ်ကားနဲ့ Oscar ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Halle Berry မင်းသမီး
Hotel Rwanda ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ချက်ပီပြင်လွန်းတဲ့ Don Cheadle
SwordFish ဇာတ်ကားက ဆု ၅ ဆု ရရှိခဲ့ပြီး ၃ ဆုက မင်းသမီး Halle Berry ရရှိခဲ့တာပါ။ မင်းသမီးတစ်ယောက် ဆုတွေရရှိတဲ့အထိ အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ရမယ့်အပိုင်းကို အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Action, Thriller, Crime ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် ပစ်ခန်းခတ်ခန်းတွေ ပါပေမယ့် တစ်လုံးတစ်ခဲကြီး ပစ်ခတ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ(Hacking)တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ တစ်ခုတော့ သတိချပ်စေချင်တာက R rated ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် (၁၇ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများသာကြည့်ရန်) မိသားစုကြည့်ဖို့အတွက် အဆင်မပြေတဲ့ အခန်းတချို့ပါဝင်ပါတယ်။
The New York Times သတင်းစာက ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး "ဒီလိုမျိုးဇာတ်ကွက်နဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အစပြုထားတဲ့ Hollywood Thriller ဇာတ်ကားမျိုးမရှိဘူး" လို့ မှတ်ချက်ပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ အခန်းမှာ John Travolta ပြောတဲ့စကားတွေက သူကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွန်းရေးထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
[FORMAT]:………………………….:) 720p BluRay
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Thriller, Crime
[FILE SIZE]:…………………….….:) 772 MB / 403 MB
[RESOLUTION]:……………….….:) 720x480 / 640x480
[Translate By]:……………………..:) Wai Lin Kyaw (mmsub Foundation)
[Encoded By]:...........................:) Nyi Htut
Labels: 2001 မြန်မာစာတန်းထိုး, Action ဇာတ်ကားများ